WARIYAHA WASHINGTON GAROWE ONLINE
Posted On 21-05-2020, 10:04AM
WASHINGTON, US – In ka badan shan milyan oo qof kuna nool dunida daafaheeda oo idil ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay qaadeen Coronavirus, sidda ay sheegtay Jaamacadda Johns Hopkins ee waddanka Mareykanka.
Sidda ku xusan macluumaad ay uruurisay Jaamacadda oo lala wadaagay saxaafada, dad ka badan 328,000 ayaa u dhintay cudurka, halka ay ka bogsadeen ku dhowaad 1.9 milyan oo ruux, guud ahaan.
Xanuunkaan oo bishii December sanadkii 2019 kasoo bilowday bartamaha Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ayaa ku faafay si dhaqsiya badan, wuxuuna kala xiray aduunyadda oo dhan.
Dowladaha caalamka ayaa diiradda saaraya siddii ay daawo ugu heli lahaayeen caabuqaan dilaaga ah gaar ahaan talaal ka hortagga.
Hay'adda Caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa leysku raacay in ay noqoto meesha kaliya ee looga dhawaaqi doono daawada saxda ah.
WHO ayaa sheegtay in kaliya shalay ay diiwaan-gelisay 106,000 kiisas oo ah Covid-19, waana maalintii ugu badneyd tan iyo markii musiibada ay soo ifbaxday, dalalka saboolka ah waa meelaha ugu daran.
Mareykanka, Brazil iyo Ruushka ayaa safka hore kaga jiray dalalka uu saameynta ugu badan ku yeeshay ayna wali ku dambeyso iyagoo la-kacaakufaya sidii kasoo kabashadda waxyeeladiisa dhinaca dhaqaalaha.
Wasiirada Puntland oo meelmariyey xeer muhiim ah
Puntland iyo Jubaland oo lagu bogaadiyey shaacinta guddiyada